Thiha Lu Lin: Samsung Galaxy S7 edge နဲ့ Galaxy S6 edge ဘာတွေကွာခြားသွားသလဲ?
Samsung Galaxy S7 edge နဲ့ Galaxy S6 edge ဘာတွေကွာခြားသွားသလဲ?
ဖုန်းအသစ်ထွက်လာတိုင်း အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အချက်ပါ။ Samsung မှာက series တွေအလိုက် ဖုန်းတွေ ထွက်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက S series ဖုန်းတွေက လူငယ်တွေအကြိုက် ဒီဇိုင်းခပ်သွက်သွက်နဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ စဦးတီထွင် ပါဝင်လာတတ်တယ်။ ဈေးလည်း မြင့်တယ်ပေါ့။ Note series ဖုန်းတွေကတော့ လူလတ်ပိုင်း လူကြီးပိုင်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နေသူတွေရဲ့ အကြိုက်။ S-pen လေးနဲ့ ဟိုခြစ် ဒီခြစ် လုပ်ချင်သူတိုင်းရဲ့ အသည်းကျော်ဆိုရမယ်။ သူ့မှာတော့ နှစ်အစမှာထွက်လာတဲ့ S series ထဲက လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို နည်းနည်းမွမ်းမံတာလေးတွေနဲ့ S-pen သုံးရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဦးစားပေး ပါဝင်လာတယ်။ ဈေးလည်း ပိုမြင့်တတ်ပြန်တယ်။
S series ကြိုက်တဲ့ လူငယ်တွေကလည်း S ကို series အလိုက် စွဲစွဲမြဲမြဲကိုင်ကြတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ် အခုကိုင်ထားတဲ့ အရင်နှစ်ထွက် S series ဖုန်းနဲ့ အခု အသစ်ထွက်တဲ့ S series ဖုန်း ဘာတွေ ကွာလည်းဆိုတာ သိချင်လာပြန်တယ်။ သိပ်မကွာရင်လည်း မလဲသင့်ရင် မလဲသေးဘူးပေါ့။ နည်းပညာတွေ အရမ်းကွာသွားလို့ လဲချင်လာလည်း လဲမှာပေါ့လေ။ ဘာတွေကွာသွားလဲ ကြည့်ရအောင်။
edge ဖုန်းနှစ်ခုကိုပဲ ချင်းချင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်။ S6 edge နဲ့ S7 edge မှာ အမြင်သာဆုံး ကွာခြားနေတာက ဖုန်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားပဲ။ S6 edge က ၅.၁ လက်မ ပဲ ရှိတယ်။ S7 edge က ၅.၅ လက်မ ရှိတယ်။ S6 edge+ ကိုတော့ ခဏထား ထားပါဦး။ S7 edge+ ရှိလာမှပဲ ပြောကြတာပေါ့။ ဆိုတော့ အရွယ်အစားက ဒသမ ၄ လောက် ကွာတယ်။ အရင်က ဖုန်းတွေ မျက်နှာပြင်ကျယ်ရင် ဖုန်းဝတုတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ ဘေးဘက်ကို ကားကားကြီးနဲ့။ ခုကျတော့ မျက်နှာပြင်သာ ကျယ်လာပေမယ့် ကိုင်ရတာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် စဉ်းစားဖန်တီးလာကြတယ်။ လက်ထဲကိုင်ထားရင် မြဲနေစေမှာမျိုးပေါ့။ edge ဖုန်းတွေဆိုတော့ ရှေ့မျက်နှာပြင်အစွန်းတွေက အခုံးလေးတွေ။ S7 edge မှာတော့ ဒီအစွန်းခုံးတွေကို ဝန်းရံပေးထားတဲ့ သတ္တုဘောင်လေးက လက်ထဲကိုင်ထားရင် မြဲစေဖို့ ပိုအထောက်အကူပေးတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ Display နှစ်ခုလုံးကတော့ Quad HD Super AMOLED တွေချည်းပါပဲ။
၂။ microSD အထောက်အပံ့
S6 edge ရော S7 edge ပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ရင် Dual SIM အမျိုးအစား ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် S7 edge မှာတော့ ဆင်းမ်ကတ် နှစ်ခုအစား SIM Slot2မှာ microSD ကတ် စိုက်လို့ရတာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ S6 edge တုန်းက microSD ကတ် ထည့်ခွင့်မရတဲ့ သုံးစွဲသူတွေ ကျေနပ်သွားလောက်တယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက microSD ကတ်ကို 200GB ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တာပါပဲ။ တော်ရုံဖုန်းတွေက 64GB ထည့်ရင်တောင် ကတ်ကနေ ပုံလေး ဗီဒီယိုလေး ကြည့်ရင် စက်လေးလာတယ်။ 200GB ကတ်စိုက်ရင်တောင် အတော်အဆင်ပြေစေတယ်ဆိုတော့ သဘောကျချင်စရာပဲ။
အဲဒါတော့ တကယ့်အရှုပ်။ S6 edge က ကျောဘက်ကင်မရာ 16MP နဲ့ ရှေ့ဘက်ကင်မရာ 5MP ရှိတယ်။ S7 edge မှာက ကျောဘက်ကင်မရာ 12MP နဲ့ ရှေ့ 5MP ရှိတယ်။ မစ်ဂါပစ်ဇယ်နည်းသွားတာ ဘာလဲပေါ့။ တကယ်တန်း ဓါတ်ပုံကောင်းအတွက် မစ်ဂါပစ်ဇယ်တွေကို ခေါင်းထဲ အရမ်းထည့်ထားဖို့ မလိုပြန်တာ သိလိုက်ရတယ်။ S7 edge ရဲ့ ကင်မရာကို Dual Pixel နည်းပညာနဲ့ တည်ဆောက်ထားတော့ ကိုယ်ချိန်ညှိတဲ့အရာတစ်ခုကို လူ့မျက်လုံးနှစ်လုံးပုံစံ ပစ်ဇယ်နှစ်ခုနဲ့ အားလုံးသော ပစ်ဇယ်တွေက အလုပ်လုပ်ပေးလို့ Focus ဖြတ်တာ အရမ်းမြန်သွားတယ်။ Professional Camera တွေမှာပဲ သုံးလေ့ရှိတဲ့ Cutting-edge Dual Photodiodes နည်းပညာပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ ကင်မရာကို အသုံးပြုတဲ့အချိန်ကို သိပ်ပူနေစရာမလိုအောင် ညအလင်းအားနည်းချိန် ရိုက်ရင်တောင် အဆင်ပြေစေဖို့ အပါချာ F1.7 lens ကို ကျောဘက်နဲ့ရှေ့ဘက် ကင်မရာနှစ်ခုလုံးမှာ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ကျောဘက်မှာက ပုံမှန် Flash မီးပါတော့ လိုအပ်ရင် မီးကူလို့ ရတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာက Flash မပါတော့ F1.7 lens တပ်ထားတယ်ပဲဆိုဦး အလင်းမရှိရင် ပုံကောင်းရိုက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး။ S7 edge မှာတော့ နည်းပညာအကူအညီနဲ့ ဖုန်း Display ကို Flash ပုံစံ အလင်းဖျော့လေး ပေးလိုက်နိုင်လို့ ရှေ့မှာ Flash ပါတာထက် ရိုက်တဲ့သူကို ပိုလှစေတယ်။ အလင်းမပြင်းတာကြောင့် မျက်စိနီနေတာမျိုးလဲ မရှိတော့ဘူးလေ။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်ဖုန်းရဲ့ Selfie ကောင်းတယ်ပြောပြော S7 edge နဲ့ စမ်းရိုက်ကြည့်တာနဲ့တင် ကောင်းလှချေလားဖြစ်သွားလောက်အောင် လူကို ချောမွေ့လှပသွားစေတာ ကိုယ်တွေ့ပါ။
S5 တုန်းကတော့ IP67 အဆင့် ရေစိုခံတယ် ပြောခဲ့တယ်။ ရှိသမျှဖုန်းအပေါက်တွေရဲ့ အဖုံး လုံ၊ မလုံ လိုက်စစ်နေရတာက အလုပ်ရှုပ်စေတဲ့အပြင် ရာဘာသားအဖုံးတွေရဲ့ အချိတ်မမြဲမှုတွေက ရေစိုခံတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ရိုက်ချိုးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ S7 edge က ရေစိုခံတယ်ဆိုတော့ မျက်ခုံး ခပ်လှုပ်လှုပ်ရယ်။ ရေစိုနဲ့ ဖုန်ဒါဏ်ခံတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တော့ တိုးသွားတယ်။ IP68 ဖြစ်လာတယ်။ ရေစိုခံနိုင်ဖို့အတွက် အဖုံးတွေ မလိုတော့ဘဲ၊ ဒီအတိုင်း ရေစိုခံနိုင်လာတာကတော့ အင်း ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့ လို့ ဆင်ခြင်မိတယ်။ ရေကူးကန်ထဲ စမ်းငုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ OMG! အော်ရလောက်အောင် ရေစိုခံတယ်ဟ။ သူပြောတာတော့ ရေအောက် ၁.၅ မီတာမှာ မိနစ် ၃၀ ထိ အဆင်ပြေတယ်ဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖုန်းဆိုတာ ရေထဲနှစ်ထားဖို့မဟုတ်တော့ အတင်းကြီး စမ်းမနေချင်တော့ဘူး။ မိုးရွာလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေထဲ မတော်တဆဖြစ်ဖြစ် ကျသွားခဲ့ရင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမသွားနိုင်ရင် ကျေနပ်စရာပါ။ တန်ဖိုးကြီးကြီး ပေးဝယ်ထားရတာကိုး။ ရေကူးကန်မှာ ရေငုပ် Selfie ကို ဓါတ်ပုံရော ဗီဒီယိုပါ စိတ်ကြိုက်ရိုက်ပြီးသကာလ အပေါ်တက်တော့ စပီကာက အသံတိုးသွားတယ်။ နည်းနည်းတော့ လန့်သွားတယ်။ သဘက်နဲ့ ပွတ်ပြီး မိနစ်နည်းနည်းကြာတော့ မူလအတိုင်းအသံပြန်ထွက်လာတယ်။ အလုံးကြီးကျသွားတယ်။ ဒီ ရေစိုခံတဲ့အချက်ကတော့ S6 edge မှာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ခဲ့တာပါ။
S6 edge မှာ မပါဝင်တဲ့ နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်က လိုင်းဆွဲအား ပါ။ S7 edge ရဲ့ ဖုန်း ထိပ်နဲ့ အောက်မှာ အင်တင်နာ နှစ်ခု တပ်ဆင်ပေးလို့ လိုင်းဆွဲအားနည်းတဲ့နေရာတွေရောက်ရင် အင်တင်နာ နှစ်ခုလုံးနဲ့ အလုပ်လုပ်ပေး၊ လိုင်းဆွဲပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ Software တစ်မျိုးနဲ့လည်း လိုင်းဆွဲအားကို မြှင့်တင်ပေးပြန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာတော့ ဖုန်းအော်ပရေတာတွေရဲ့ ဝန်ဆောင်ပေးမှုအပိုင်းတွေပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်နေပါသေးတယ်။ လိုင်းလုံးဝ မရှိတဲ့နေရာမှာတော့ ဖုန်းပြောဖို့ ဒေတာသုံးဖို့ လိုင်းဆွဲအားဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ဖုန်းဖြစ်ဖြစ် အလကားဖြစ်နေမှာပါပဲ။
၆။ CPU နဲ့ GPU
S7 edge ကို အမေရိကန်၊ တရုတ်နဲ့ ဂျပန် ဈေးကွက်များမှာတော့ Quad Core နဲ့ ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာအပါအဝင် ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ Octa Core နဲ့ ဖြန့်ချိပါတယ်။ CPU ကို အလုပ်များများလုပ်ရင် ဖုန်းပူလာတဲ့ ဒုက္ခကင်းဝေးအောင် Liquid Cooling System ကို အသုံးပြုပေးထားတာက S6 edge နဲ့ ကွာသွားပါတယ်။ ဖုန်းမပူတော့ဘူးလား ဒါဆို။ အဲလိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိရိယာသေးသေးလေးကို ကွန်ပျူတာတစ်ခုစာ အသုံးပြုလာနိုင်တဲ့နောက်တော့ ကွန်ပျူတာတွေတောင် ပူသေးတာပဲ ဖုန်းသေးသေးလေးဆို ပူတော့မပေါ့လေ။ ဖုန်းပူလာပေမယ့် ပူတဲ့အပူ မများအောင်နဲ့ ဖုန်းပူနေချိန် မကြာမြင့်ဘဲ ပြန်အေးချိန် မြန်အောင်တော့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Graphic ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့အတွက် မျိုးဆက်သစ် GPU (Graphic Processor Unit) ကို အသုံးပြုပေးလိုက်တော့ Gamer တွေအကြိုက်တွေ့သွားတာပေါ့။ Liquid Cooling System ကလည်း ဂိမ်းကစားချိန်ကြာလို့ ဖုန်းပူတာကို အထိုက်အလျောက်ဖြေရှင်းပေးသွားနိုင်သလို ဂိမ်းကစားရင် ထစ်ငေါ့ လေးလံတာမျိုး မဖြစ်အောင်လည်း ထောက်ပံ့တဲ့စနစ်တွေ ဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ Gamer တွေအကြိုက်တွေ့မယ့် Game Tool တွေနဲ့ Game Launcher တွေ S7 edge မှာ ပါဝင်လာတယ်။ ဂိမ်းကစားနေချိန် ဂိမ်းကို ရပ်သွားစေအောင် နှောင့်ယှက်ပေးမယ့် ဖုန်းဝင်လာတာ၊ မက်ဆေ့ခ်ျဝင်လာတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် Setting တွေ ပါဝင်လာတယ်။ ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးမယ်။ ကစားနေရင်း screenshot ရိုက်လို့ရမယ်။ ဂိမ်းကို သိမ်းလို့ရမယ့် နည်းပညာတွေ ပါဝင်လာတာကတော့ လူငယ်တွေအတွက် S series ဆိုတာကို ပိုပြီး မီးမောင်းထိုးပြနေသလိုပါပဲ။
၇။ System ကို အင်္ဂလိပ်လို သုံးပြီး ဇော်ဂျီကို မြင်ချင်တယ်
မြန်မာပြည်အတွက်တော့ ထူးခြားတဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခုပဲ ဒီ မြန်မာစာကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တရားဝင် ရောင်းချတဲ့ S7 edge ဖုန်းတွေမှာပဲ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက S6 edge နဲ့ S7 edge ရဲ့ ကွာခြားချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ Language Setting မှာ မြန်မာ (Zawgyi) သို့မဟုတ် မြန်မာ (Unicode) ရွေးလိုက်တာနဲ့ System တစ်ခုလုံး မြန်မာလို ပြောင်းသွားတာကို မနှစ်သက်ကြသူတွေအတွက်က အတော်လေး အဆင်ပြေသွားတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း System ကိုတော့ အင်္ဂလိပ်လို သုံးချင်တယ်။ Facebook တို့လိုမျိုးမှာတော့ ဇော်ဂျီမြန်မာစာလေး မြင်ချင်တယ်။ ဒါကို အဆင်ပြေဖို့ အရင်ဖုန်းမှာ Font file ကို သီးသန့် ထပ်ထည့်ရတယ်။ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူအတွက်က ကိစ္စမရှိပေမယ့် ဒါမျိုးကို မရင်းနှီးသူများအတွက်တော့ နည်းပညအကူအညီအသေးအဖွဲပေမယ့် ကူညီမယ့်သူ လိုက်ရှာနေရတယ်။ S7 edge မှာတော့ အဆင်ပြေပြီ။ Language Setting မှာ English (Zawgyi) ဆိုတာ ပါလာပြီမို့ System တစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလိပ်လိုသုံးရင်း ဇော်ဂျီမြန်မာစာ မြင်ရပြီလေ။ တစ်ခုတော့ ရှိသေးတယ်။ Google ကတော့ Unicode ကို အထောက်အပံ့ ပေးတာမို့ Android ကို သုံးရတဲ့ Device တစ်ခုအနေနဲ့ Google ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် App တွေမှာတော့ ဒီဇော်ဂျီကိစ္စကို မြင်ရဖို့ ခက်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီ မြန်မာစာ အခက်အခဲကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးထားတယ်လို့တော့ မြင်မိပါတယ်။
၁၆ မတ်လ ၂၀၁၆
Posted by Thiha Lu Lin at 5:56 PM